1. Waxaa la rumeysan yahay in dad badan laga yaabo inay leeyihiin akoonno hore oo Instagram ah oo aysan mar dambe isticmaalin. Laakiin ma xidho oo koontadaada keligeed bay ka baxaysaa, markaa macluumaadkaaga iyo sawirradaadu weli way ku jiri doonaan khadka tooska ah. Sidaa darteed, si looga horjoogsado dadka kale inay helaan macluumaadka iyo sawirrada. Maanta waxaan soo bandhigi doonaa talaabooyin ku saabsan sida loo tirtiro koontada 'Instagram' Marka la tirtiro xisaabta Instagram, waxaa lagu sameyn karaa 2 qaab: si ku meel gaar ah barkinta barta Instagram oo si joogto ah u tirtir. Haddii aad rabto inaad ogaato waxaad u baahan tahay inaad sameyso, aan eegno.
2. Sida si kumeelgaar ah barkinta loo furo akoonka Instagram
3. Ka joojinta ku-meel-gaarka ah ee koontada Instagram, waxay ka dhigeysaa milkiilaha koontada, kuwa raacsan iyo dadweynaha guud. Aan arki karin koontooyin ama waxqabadyo ka sameyn karo koontada xiran. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada noocan ah xisaab xiritaanka ayaa ah inaad dib u bilaabi karto firfircoonida goor dambe. Tallaabooyinka si ku meel gaar ah barkinta looga dhigo koontadaada 'Instagram' waa sida soo socota: Marka hore, waxaad aadaysaa https://www.instagram.com/ Adoo dejinaya koontadaada 'Instagram', waa inaad ka soo gasho bogga biraawsarka kaliya. Lama xidhi karo barnaamijka Instagram
4. Markaad gasho nidaamka Guji si aad uhesho boggaaga astaanta.
5. Kadib dhagsii badhanka astaanta tafatirka.
6. Goor dambe markaad geleyso bogga wax ka beddelka astaanta Waxaad riixi kartaa badhan. "Ka jooji koontadayda si ku meel gaar ah"
7. Kadib waxaa lagaa codsan doonaa inaad dooratid sabab aad si kumeelgaar ah u shaqeyneyso koontadaada oo aad gasho lambarkaaga sirta ah ee 'Instagram' .Markaad wax walba dhammeyso, riix batoonka. "Si ku meel gaar ah barkinta xisaabta isticmaale" ayaa la sameeyaa.
8. Sida loo tirtiro koontada Instagram si joogto ah
9. Tirtirida joogtada ah ee xisaabtaada Instagram waa in si joogto ah loo tirtiro koontadaada iyo dhammaan xogtaada. Oo dib looma soo celin karo Tallaabooyinka si joogto ah looga tirtiro koontada 'Instagram' waa sida soo socota - Tallaabada ugu horreysa ee aad aadeyso >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ adoo ka galaya koontada Instagram adoo adeegsanaya barta internetka oo kaliya. Kadib waxaad riixaysaa badhanka. "Tirtir .. (magaca akoonkaaga) .." waa la dhammeeyay. Si kastaba ha noqotee, marka aad riixdo badhanka koontada tirtiro, koontadaada isla markiiba lama tirtiri doono. Laakiin waa la qarin doonaa Waana laga tirtiri doonaa taariikhda iyo waqtiga la cayimay Haddii aysan cusbooneysiin, koontadaada waa la tirtiri doonaa. Waad soo noqon kartaa oo waad joojin kartaa tirtirka akoonka. Laakiin haddii taariikhda iyo waqtiga la cayimay ay dhaafeen, koontadaada si joogto ah ayaa loo tirtirayaa lamana soo kaban karo.